Ngubani uMnqandi? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Umyalezo wakutsha nje ovela kwimboni yaseKhanada, uFr. Michel Rodrigue, yasasazwa ngokubanzi kwileta esiyifumene nayo kuye (Cofa apha ukuyifunda emazantsi eli nqaku). Uthi ube nephupha lesiprofeto apho kwatyhilwa ukuba iSt Joseph "ngumnqandeli" we-2 Tesalonika 2 obambe umchasi-Kristu, kwaye lo mthinteli uya kususwa ekupheleni koNyaka ka-St. nge-8 kaDisemba, 2021.
Ngubani lo "mthinteli" wayesaziwa ngexesha likaSt. Paul, kodwa khange kubhalwe kwincwadi yakhe eya kwabaseTesalonika. Naku oko kuthethwe ngamazwi amaninzi eCaweni, kuquka nabaSeki beCawa, malunga nale ndima ukutyhubela iinkulungwane…
Kwi-2 kwabaseTesalonika 2, uSt. Paul uthetha ngento "ethintela" uMchasi-Kristu okanye "ongenamthetho." Ubhala athi:
Kwaye niyakwazi okubambezelayo ngoku, ukuze atyhileke ngelakhe ixesha. Kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza; kuphela kwalowo uthintelayo uya kukwenza oko, ade ade lowo umbambezeleyo. Uya kwandula ke umchasi-mthetho atyhileke… (I-2 Tessional 2: 6-8)
USt.Paul nabafundi bakhe babesazi ukuba ngubani okanye yintoni ethintela imfihlelo yolwaphulo-mthetho eya kuthi ikhokelele "kulomthetho" - kodwa asixelelwa. Ukusukela oko, aBaseki beCawa, abafundisi bezakwalizwi kunye neengcwele bathelekelela oko uluntu lwaseSt.
KaSt. Michael iengelosi enkulu
Ukuqiniseka, uSt Michael uMngelosi omkhulu, "umkhuseli nomxhasi" waBantu bakaThixo, ngumntu ophambili ophambi kokubonakaliswa komchasi-Kristu. Umprofeti uDaniel ubhala ngelo xesha lolawulo luka-Antichrist (Dan 12:11):
Ngelo xesha kuya kuvela uMikayeli, umthetheli omkhulu, ongumgcini wabantu bakho; iya kuba lixesha elingenakuthelekiswa nanto ekuqalekeni kwesizwe de kube lelo xesha… (Dan 12: 1)
Kwaye siyabona ukuba, kwangoko ngaphambi kokubonakaliswa komchasi-Kristu, uMichael kunye neengelosi zaseZulwini balwa nenamba kunye neqela lakhe eliwileyo:
Kwabakho ke imfazwe emazulwini; UMikayeli neengelosi zakhe balwa idabi nenamba. Inyoka yakudala, leyo kuthiwa nguMtyholi, uSathana ke, lowo ulilahlekisileyo ihlabathi liphela, waphoswa emhlabeni, neengelosi zakhe zaphoswa phantsi kunye nayo. Inamba yanika eyayo amandla kunye netrone, ndawonye negunya elikhulu. (Umfu. ISityhi. 12: 7-13: 2)
Ngokwentsomi-kwaye iiakhawunti ziyahluka ngokweenkcukacha-uPopu Leo XIII wayebhiyozela iMisa ngenye imini xa ngequbuliso waba nombono ngexesha okanye emva kwenkonzo.
U-Leo XIII wabona ngokwenyani, embonweni, oomoya beedemon ababehlanganisene kwisiXeko esiNgunaphakade (iRoma). -Uyise uDomenico Pechenino, ingqina lokuzibonela; Ephemerides Liturgicae, ingxelo ngo-1995, iphe. 58-59
Emva koko, uBawo oyiNgcwele wabhala umthandazo kuSt. Inguqulelo emfutshane yayiza kuthethwa emva kwayo yonke iMass ephantsi kwihlabathi liphela. Kodwa kwinguqulelo ende, uPopu Leo wabhala ngala "dragon" kwiSityhilelo Isahluko 12:
Yabona olu tshaba luphambili kunye nombulali wabantu luthathe inkalipho… Le namba ingendawo iyiphalaza, njengesona sikhukula singcolileyo, ityhefu yobubi bayo ebantwini ... KwiNdawo eNgcwele uqobo, apho ibekwe khona eyona ndawo ingcwele Peter noSihlalo weNyaniso ngokukhanya kwehlabathi, baphakamise itrone yobubi babo obungamasikizi, benoyilo olubi ukuba xa uMfundisi ebethiwe, izimvu zisasazeke…. -Kusuka kwiRaccolta yaseRoma kaJulayi 23, 1898, kunye nesongezelelo esivunyiweyo ngoJulayi 31, 1902; zintinksman.com
Emva koko ubhengeza iSt. Michael:
Vuka ke, Nkosana engenakoyiswa… njengomkhuseli nomxhasi wabo; kwi-The Holy Church izukisa ngokuzikhusela kwayo kumandla esihogo; Kuwe uThixo uyiphathisile imiphefumlo yabantu ukuba isekwe ezulwini. Owu, thandaza kuThixo woxolo ukuba abeke uSathana phantsi kweenyawo zethu… kwaye ebetha phantsi inamba, inyoka yakudala enguMtyholi kunye noSathana, Ngaba uya kuphinda umenze umthinjwa enzonzobileni, ukuze angaphindi ahende iintlanga. Amen. -Kusuka kwiRaccolta yaseRoma kaJulayi 23, 1898, kunye nesongezelelo esivunyiweyo ngoJulayi 31, 1902; zintinksman.com
Zimbini izinto ezibalulekileyo… uPopu Leo wayenombono wexesha apho upopu wexesha elizayo “azakubethwa” zize izimvu zichithakale. Kuba esi sisiqhamo se "yoyilo olungendawo" uPopu Leo XIII ngokwakhe angathi nguFreemason,cf. Uhlobo lomntu Ngaba oku kubhekisa kupopu wokubulawa okanye ukugxothwa- okanye ukuphulukana negunya elipheleleyo lokuziphatha, ngenxa yoko, ukuphosa umhlambi kwisiphithiphithi kwaye kuvulela indlela laa Ngcuka, "uNyana wentshabalalo"? Okwesibini, uPontiff ubona iSt. Michael njengohlobo oluthile lwamandla kaThixo abetha inamba.
Yobukhosi baseRoma kunye neNtshona
Umbono onegunya ngakumbi kukuba "lowo" uthintelayo ngu-Emperor wase-Roma, njengommeli womthetho nocwangco olunyanzeliswa bubukhosi base-Roma. UPaul Paul ufundisa ukuba Usuku lweNkosi kwandulelwa kuqala luwexuko okanye yimvukelo, yimvukelo, a gu qulelo ngokuchasene nokholo (mhlawumbi olubonakaliswe kwimpucuko yobuKristu), ethi iphele ngokuvela komchasi-Kristu okanye "ongenamthetho."
Oku kuvukela okanye ukuwa kuqondwa ngokubanzi, ngooTata bakudala, ngemvukelo yobukumkani baseRoma, eyaqala ukutshatyalaliswa, ngaphambi kokuza kuka-Antichrist. Kusenokwenzeka, mhlawumbi, kuqondwe ngemvukelo yamazwe amaninzi kwiCawe yamaKatolika, esele iyinxenye esele yenzekile, esebenzisa uMahomet, uLuther, njl njl. Umchasi-Kristu. —Umbhalo wama-2 kwabaseTesalonika 2: 3, IDayay-Rheims Ibhayibhile Engcwele, iBaronius Press Limited, 2003; iphe. 235
Ubhala uSt. John Henry Newman:
Ngoku ke eli gunya lithintelayo livunywa njengobukhosi baseRoma… andiyiniki into yokuba ubukhosi baseRoma bumkile. Kude lee: ubukhosi baseRoma buhleli unanamhla. —St. Ikhadinali John Henry Newman (1801-1890), Advent Adventermons on Antichrist, Ntshumayelo I
Kuyaphawuleka ukuba uKhadinali ohloniphekileyo uRobert Sarah wagxininisa ukuba ukuwa ngokwasemoyeni nangokwenkolo kwangoku kweNtshona, eyintsalela yoBukhosi baseRoma, "kungumthombo" wokuwela kwethu esihogweni sohlobo olutsha emhlabeni:
Ingxaki yokomoya ibandakanya umhlaba wonke. Kodwa umthombo wayo useYurophu. Abantu baseNtshona banetyala lokwala uThixo… Ukuwa ngokwasemoyeni kunesimo saseNtshona…. Ngenxa yokuba [indoda yaseNtshona] iyala ukuvuma ukuba iyindlalifa [yokomoya nenkcubeko yamadoda], umntu ugwetyelwe esihogweni somhlaba jikelele wenkululeko apho iimfuno zomntu ngamnye zijongana ngaphandle komthetho wokuzilawula ngaphandle kwenzuzo ngalo naliphi na ixabiso. iyala ukwamkela, kwaye iyakwamkela kuphela oko ikwenzela yona. I-Transhumanism yeyona avatar yokugqibela yale ntshukumo. Kuba sisipho esivela kuThixo, indalo yomntu uqobo ayinyamezeleki kwindoda yasentshona. Le mvukelo ingokomoya. -IHerald yamaKatolikaNge-5 ka-Epreli 2019
Ukunikwa yonke imiqondiso yamaxesha ethu kule nkulungwane idlulileyo okanye nangaphezulu, i Ishishini lesine Revolution ukuba singena ngoku ngumgqatswa oqinileyo kule mvukelo yokugqibela nxamnye ne-Divine-intshukumo ye-transhumanist eyala icebo likaThixo lendalo kwaye izama ukuzalisekisa isilingo eMyezweni wase-Eden "ngokukhanyiselwa" kunye netekhnoloji: “Aya kuvulwa amehlo enu, nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi” (Genesis 3: 5).
Kukudityaniswa komzimba wethu, idijithali, kunye nokuzazisa kwethu. - INtshu. Klaus Schwab, intloko yeQonga lezoQoqosho leHlabathi (i-WEF) kunye nomququzeleli woHlaziyo lweShishini lweSine. Ukusuka Ukunyuka kweAntichurch, 20: 11, rumble.com
Kubaluleke kakhulu ukuba iZizwe eziManyeneyo, iPontifical Academy of Sciences yaseVatican, kunye neenkokheli ezininzi zaseNtshona, hayi uMongameli uJoe Biden omncinci, batyikitye kwi-WEF "Great Reset", ngokufuthi besebenzisa isigama sayo esithi "Yakha umva ngcono". Awunakho "ukuseta kwakhona" ngaphandle kokuba uqale ngokutsha; awunakho “ukwakha ngcono” ngaphandle kokuba uyakudiliza okukhoyo. Ngokuchaseneyo, njengoko sibukele ubonelelo lwamatyathanga e-crumble kunye nemiyalelo yokugonya isusa iindawo eziphambili kumazwe aseNtshona, ezinje ngokudubula kwamapolisa, abacimi-mlilo, kunye nabasebenzi bezempilo- siphikisana ngokutshatyalaliswa ngabom kweNtshona, ukuba akunjalo iziseko zophuhliso zehlabathi liphela.
… Eyona njongo yazo iphambili iyazinyanzela ukuba zijongwe-oko kukuthi, ukubhukuqwa ngokupheleleyo kwayo yonke inkolo kunye nezopolitiko zehlabathi eziveliswe yimfundiso yobuKrestu, kunye nokutshintshwa kwemeko entsha yezinto ngokuhambelana nezimvo zabo, apho iziseko kunye nemithetho ziya kuthathwa khona ubume bendalo. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20, 1884
Kwelinye icala, “iliwa” elakhelwe phezu kwalo iCawe- nelathi ke lahlanganiswa ngokuqinileyo nempucuko yaseNtshona- nguBawo oyiNgcwele ngokwakhe. UBenedict XVI ujonge umlandeli kaPeter njengohlobo lomnqandi wobubi:
UAbraham, utata wokholo, kungokholo lwakhe iliwa elibambe isiphithiphithi, isikhukhula esandayo somkhukula wentshabalalo, kwaye ngaloo ndlela sigcina indalo. USimon, owokuqala ukuvuma ukuba uYesu unguKrestu… ngoku uba ngenxa yokholo luka-Abraham, oluhlaziyiweyo kuKristu, iliwa elimelene nomsinga wokungakholwa kunye nokutshatyalaliswa komntu. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Ukubizwa kuMthendeleko, Ukuqonda iBandla namhlanje, UAdrian Walker, Tr., Iphe. 55-56)
Ebotshelelwe ngakuBawo oyiNgcwele nguMzimba kaKristu uphela-amadoda nabafazi abangcwele-okanye ukusilela kwawo. Xa uPopu Benedict XVI wathandazela ukukhawulezisa uloyiso lweNtliziyo egqibeleleyo, kamva wacacisa:
… Amandla obubi athintelwe amaxesha ngamaxesha, [kwaye] kaninzi amandla kaThixo ngokwakhe aboniswa kumandla kaMama kwaye awugcine uphila. Icawe ihlala icelwe ukuba yenze oko kufunwe nguThixo ku-Abraham, nokuqinisekisa ukuba kukho amadoda alungileyo ngokwaneleyo okucinezela ububi kunye nentshabalalo. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko noPeter Seewald (Ignatius Cofa); iphe. 166
Kwixesha lethu, kunanini na ngaphambili, olona phawu lubalaseleyo lwabantu abatyekele ebubini bubugwala nobuthathaka bamadoda alungileyo, yaye onke amandla olawulo lukaSathana abangelwa bubuthathaka obulula bamaKatolika. —IIPOPE ST. IPIUS X, Ukupapashwa koMmiselo weeNdawo eziHorikhi zikaSt.Joan waseArcnjl., Nge-13 kaDisemba, 1908; IVatican.va
Kumyalezo oya eSt. Faustina, siva ngamandla athintelayo umbingelelo:
Emva koko ndeva ilizwi liphuma kuloo mangaliso:Buyisela ikrele endaweni yalo; idini likhulu kakhulu. ” -Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 394
INavarre Bible Commentary ithi:
Nangona kungacacanga konke okuthethwa nguSt. indlela yokuphepha ukwenza ububi (ububi ukuba "yimfihlelo yokuchas 'umthetho"). Nangona kunjalo, kunzima ukutsho ngokuchanekileyo ukuba yintoni le mfihlelo yokuchasana nomthetho okanye ngubani oyithintelayo. Abanye abahlalutyi bacinga ukuba imfihlelo yolwaphulo-mthetho ngumsebenzi womchasi-mthetho, othintelwa yimithetho engqongqo enyanzeliswa bubukhosi baseRoma. Abanye bacebisa ukuba iSt. Michael ngoyena ubambe umva komthetho (cf.ISityhi 12: 1; ISityhi 12: 7-9; 20: 1-3, 7)… Ezimbonisa ukuba ulwa noSathana, uyamnqanda okanye umvumela ukuba akhululeke… abanye bacinga ukuba ukuthintelwa komchasi-mthetho bubukho obusebenzayo bamaKrestu ehlabathini, abathi ngelizwi nangomzekelo bazise imfundiso nobabalo lukaKristu kwabaninzi. Ukuba amaKristu avumela inzondelelo yawo ibande (le nkcazo ithi), ukuthintela ububi kuya kuyeka ukusebenza kwaye imvukelo iya kulandela. —ITesalonika kunye neeleta zabefundisi, iphe. Ngama-69-70
Okanye ngaba oko kuthintelayo inganguYesu ngokwakhe kwi-Eucharist eNgcwele- ekugqibeleni "wasuswa" kwiindawo ezingcwele zamabandla ethu ukwenza "isikizi"?
… Ukuzincama esidlangalaleni [kweMisa] kuya kuyeka ngokupheleleyo… —St. URobert Bellarmine, UTomus Primus, uLiberiyer Tertius, p. 431
Kolunye lwazo kwaphuma uphondo oluncinci [Umchasi-Kristu] eyakhulayo yakhula yangasemazantsi, nasempuma, nakwilizwe elizukileyo. Yakhula yada yaya kumkhosi wezulu, wayikhahlela emhlabeni ezinye iinkwenkwezi zeyinyathela ngeenyawo. (cf. Xa iinkwenkwezi ziwayo). Yakhula yada yaya kwiNkosana yomamkeli [uPopu?], ekwakususwa kuye umbingelelo wemihla ngemihla, kuqwengwa ingcwele yabo [iVatican?]. Umbuki zindwendwe wanikelwa kunye nomnikelo wemihla ngemihla ngexesha lokreqo. Iphose inyani emhlabeni, kwaye ibiphumelela kwisenzo sayo… Kususela kwelo xesha kupheliswa ngalo idini lemihla, nokumiselwa kwesikizi lesiphanziso, liya kuba liwaka elinamakhulu amabini, anamanci asithoba eentsuku. (Daniel 8:9-12, 12:11)
Xa ubona isikizi lesiphanziso ekuthethwa ngalo ngoDaniyeli umprofeti limi endaweni engcwele (mfundi lowo makaqonde), mabathi ngelo xa abo bakwaYuda basabele ezintabeni… (Mat 24: 25-16)
Ukubaluleka kweMisa njengomthinteli weentlobo kuye kwagxininiswa ngabaNgcwele ababini eCaweni:
Ngaphandle kweMisa eNgcwele, ingaba yintoni kuthi? Zonke apha ngezantsi zingatshabalala, kuba yiyo kuphela enokubamba ingalo kaThixo. —St. UTeresa waseAvila, UYesu, Uthando lwethu lwe-Ekaristi, nguFr. UStefano M. Manelli, FI; iphe. 15
Kuya kuba lula kwihlabathi ukuba liphile ngaphandle kwelanga ngaphandle kokwenza ngaphandle kweMisa eNgcwele. —St. IPio, Ibid.
Ngaba isithinteli sele siphakamisile?
Oku kulandelayo ngamava obuqu, abaluleke kakhulu kubulungiseleli bam bokuqonda iyure esingena kuyo ngoku. Ndacelwa ngubhishophu wamaKhanada waseKhanada ukuba ndibhale la mava ndize ndiwazise, ​​into endiza kuyenza kwakhona apha. cf. Ukususa isithintelo
Ngo-2005, ndandiqhuba ndedwa eBritish Columbia, eCanada kukhenketho lwekonsathi ndisendleleni eya kwindawo yam elandelayo, ndonwabela ubuhle bendalo, ndikhukuliswa yingcinga… ndathi ngesiquphe ndeva entliziyweni yam la mazwi:
Ndiphakamise I restrainer.
Ndeva into emoyeni wam kunzima ukuyichaza. Kwakungathi kuthuka umhlaba — ngokungathi kunjalo into ethile kummandla wokomoya wayekhululwe. Ngobo busuku kwigumbi lam le-motel, ndabuza eNkosini ukuba ingaba le nto ndiyivileyo ibiseZibhalweni na, kuba igama elithi "restrainer" lalingaziwa kum. Ndithathe ibhayibhile yam evule ngqo kwi-2 yabaseTesalonika 2: 3-8, osele uyifundile ngasentla. Ukuthetha okuncinci, ndothuswe kukufunda igama elithi "restrainer" ngombala omnyama nomhlophe.
Okwalandela kamva kulo nyaka yayikukuqala kokuchazwa kwakhona komthetho wendalo eCanada, kulo mtshato umtshato-owawusasazeka ngokukhawuleza kwamanye amazwe. Oku kwalandelwa “yimibono yesini” kunye nelungelo lokwenza ngaphandle komoya omncinci wesini. Kwaye, ewe, ukungakhathalelwa ngabom komntu ongekazalwa kuqhubekile nokubulawa kweentsana kwihlabathi jikelele izinto ezingazange zibonwe lihlabathi.
… Umhlaba wethu kwangaxeshanye ukhathazwa yinto yokuba ukuvumelana kokuziphatha kuyawa, imvumelwano engenakho ukusebenza ngezomthetho nakwezopolitiko ... kuphela ukuba kukho ukuvumelana okunjalo kwimigaqo-siseko nokusebenza komthetho. Esi sivumelwano sisisiseko esivela kwilifa lobuKristu sisemngciphekweni… Ngokwenyani, oku kwenza ukuba isizathu singaziboni izinto ezibalulekileyo. Ukuchasana noku kusithwa kwesizathu nokugcina amandla okubona okubalulekileyo, ukubona uThixo nomntu, ukubona okulungileyo nokuyinyani, ngumdla oqhelekileyo ekufuneka umanyanise bonke abantu benentando elungileyo. Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwiRoyal Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010
Ngamafutshane, besibona ubungqina bokwenene "bokuchas 'umthetho," obusaqhubeka ukuza kuthi ga kulo mzuzu nanjengoko imithetho yesayensi ishiywe yonk' into ukuze siqhubele phambili impucuko yaseNtshona emhlabeni phantsi kweentsika ezimbini zoHlengahlengiso oluKhulu: 19 "kunye" notshintsho lwemozulu. "Ukusetha kwakhona kwakhona kwaye Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi
I-post-Covid pseudo-medical order ayitshabalalanga kuphela iparadigm yezonyango endiyenzileyo ngokuthembekileyo njengogqirha kunyaka ophelileyo… oko ku rhoxiswa . Andi ya yiqonda apocalypse karhulumente kwimeko yam yonyango. Ukuphefumla isantya kunye nokusebenza ngokungenalusini apho i-media-media complex ikhethe ngayo ubulumko bethu kwezonyango, idemokhrasi kunye norhulumente ukungenisa lo myalelo mtsha wezonyango yi yenguqu enze. -Ugqirha wase-UK ongaziwa njengo “Ugqirha Ongaqhelekanga”
Yiyo loo nto kubonakala ngathi siyonelisa Isantya se-warp Amagama amiselweyo kaBawo weCawa, uLactantius:
Bonke ubulungisa buya kudana, kwaye nemithetho iya kutshabalaliswa… Elo iya kuba lixesha apho ubulungisa buya kukhutshelwa ngaphandle, kwaye ubumsulwa buthiyiwe; apho abangendawo baya kudla abo balungileyo njengeentshaba; akukho mthetho, nocwangco, okanye uqeqesho emkhosini oluya kugcinwa… zonke izinto ziya kubhidaniswa zixutywe kunye ngokuchasene nelungelo, kunye nemithetho yendalo. Umhlaba uya kubharha, kube ngathi kukwinto eyodwa (cf. Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi). Xa ezi zinto zisenzeka, abalungileyo nabalandeli benyaniso baya kuzahlula kwabakhohlakeleyo, babalekele kwiindawo ezihlala bodwa. -UBawo weCawa, uLactantius (c. 250 -c. 325), Ootata beCawa: Amaziko obuThixo, Incwadi VII, Isahluko 15, 17
Ngelo xesha lokuzalwa komchasi-Kristu, kuya kubakho iimfazwe ezininzi kunye nocwangco olufanelekileyo oluya kutshatyalaliswa emhlabeni. Uqhekeko luya kugqugqisa kwaye abawexuki baya kushumayela iimpazamo zabo ekuhleni bengathintelwa. Nokuba phakathi kwamaKristu amathandabuzo kunye nokuthandabuza kuya kwamkelwa malunga neenkolelo zobuKatolika. —St. Hildegard, Iinkcukacha ezenza umchasi-Kristu, ngokweZibhalo eziNgcwele, iNkcubeko kunye neSityhilelo sabucala, uNjingalwazi Franz Spirago
Konke oku kuthetha ukuba zininzi izinto ezibambe umchasi-Kristu, ngokuqinisekileyo, abasenzi njalo. Kwaye ngaloo nto, sivakalelwa kukuba eli cebiso alinakuba ngaphezulu koku
Icawe ngoku iyakubeka ityala phambi koThixo ophilayo; Uxela izinto ezinxamnye nomchasi-Kristu ngaphambi kokuba bafike. Nokuba azakwenzeka ngexesha lakho thina asazi, okanye nokuba ziya kwenzeka emva kwakho esingazi; kodwa kulungile ukuba, ukwazi ezi zinto, kufuneka uzikhusele ngaphambili. —St. UCyril waseJerusalem (c. 315-386) Ugqirha weCawa, Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.9
-UMark Mallett ngumbhali we Imbonakalo yokuGqibela kwaye ILizwi ngoku, kunye nomsunguli we-Countdown to the Kingdom
Ingelosi eyintloko uSt. Gabriel kuFr. UMichel Rodrigue ngobusuku bango-Matshi 17, (ekuseni nge-Matshi 18), ngo-2021:
Ngobusuku buka-Matshi 17, 2021, ingelosi yeNkosi (kamva, ndaqonda ukuba yayinguSanta uGabriyeli iNgelosi enkulu) yeza nge-2: 30 ebusuku izokundixelela ngobungcwele nobulumko obukhuluingqiqo: amandla okanye ukuqonda ukuqonda ukuba inoxanduva okanye kufanelekileyo ekuhlaleni. ka-Saint Joseph ngeNtsapho eNgcwele kunye nendima yakhe ekupheleni kwamaxesha amabi. Ndithi "ukuphela kwamaxesha amabi" ukubonisa ixesha elahlukileyo kokubuya kukaKristu okuzukileyo esiphelweni sexesha.
La mava, ndiza kuwabalisa… ndiwabiza ngokuba liphupha lesiprofetho. UGabriel waqala wazibonakalisa njengokukhanya okuqaqambileyo. Ngokuthe ngcembe, ndenza uhlobo lokukhanya ngento ebonakala ngathi ngamaphiko okukhanya. Apho kwaphuma ekubeni kukuqaqamba okwazisa uvuyo kunye noxolo olunzulu kakhulu kuThixo. Kwakungathi kukungena kwinqanaba lesibhakabhaka, ukulijonga. Emva koko kwavakala ilizwi lakhe:
Ndize kutyhila ubukrelekrele bukaJoseph oNgcwele ukusuka ngexesha endathetha naye de kwaba ngumhla wokuhamba kwakhe emhlabeni. Indima yakhe njengomkhuseli kunye nomgcini weNtsapho eNgcwele yayingomnye woxolo olukhulu kunye nokuzithemba okukhulu kuThixo, uBawo ongunaPhakade. Kuye, njengeyona Ngcwele iNtombikazi enguMariya, wanikwa eyokuqala, eyona ingcwele ulwazi lwemfihlelo kaBathathu Emnye kaYise nonyana kunye noMoya oyiNgcwele. Ukwamkelwa simahla kokuthabatha iNtombikazi enguMariya njengomtshakazi wakhe kwamnika uvuyo lolwazi olufakelweyo olunobuhlobo obuphilayo kunye notata noYesu, uMdali wakhe, uKumkani wakhe, kunye nothando lwaKhe-olu lwazi uYosefu walufumana kuthando awayenalo ngoMariya , umtshakazi wakhe, kunye nentando kaBawo uSomandla. Ukususela kuloo mzuzu, uJoseph wamthabatha uMary, umfazi wakhe, wamsa ekhayeni lakhe, waqinisekisa ulungiselelo lothando lukaMariya noMntwana.
Umdlalo weqonga owenzeka ngexesha lokuzalwa kukaMsindisi uphakamisa ukuthathelwa ingqalelo kwegunya lakhe elikhulu, elenza ukuba kulondolozwe uMntwana-kaThixo noMama wakhe nakweyiphi na imiqondiso enokuthi ibeke ubume boMntwana emngciphekweni-yiyo ke loo nto Umtyholi kunye nabalandeli bakhe babenokumenzakalisa uYesu noMama wakhe. Amandla akhe nothando lwagcina umtyholi kunye neeacolyte zakhe. Kude kube ngumhla wokuzalwa koKumkani woMntwana, noHerode kunye neqela lakhe babengazi nto ngako oko. Ukanti umqondiso wawusezulwini; ooMagi babe sele behamba ukuya kudibana noMntwana kaThixo, kwaye abelusi, abona bantu bancinci ebantwini, bafundiswa lilizwi leengelosi!
Okwangoku xa uHerode wayefuna ukubulala uMntwana kaThixo, ndamlumkisa uJoseph ephupheni, ngentando kaBawo ongunaPhakade, ukuba athathe umntwana noMama wakhe abalekele eYiphutha. Wahlala apho de kwasekufeni kozwilakhe. Emuva eNazarete, iNtsapho eNgcwele yahlala kuyo yonke iminyaka yokukhula kukaYesu. Akukho mntu wayekrokrela ukuba ngubani uYesu noMama wakhe. Ingqiqo kaJoseph yayigqibelele ukuze ingatsali amehlo oMubi kwaye ke ithintele icebo likaThixo, uBawo wethu. Ukuba ngutata kukaJoseph ukukhusela umntwana kunye noMama wakhe ngendlela enkulu kakhulu ukuba kungabikho mntu unokuchaza okanye asondele. Ukuthantamisa kukayise kukaJoseph kwakufana nomqolomba weli Litye, ekhusela umntwana kunye noMama wakhe kwiimvakalelo zeli hlabathi. Obo bulumko buqhubeke buthule nasemthandazweni, emsebenzini wemihla ngemihla, nangamaxesha okuphumla, ukunqanda ukurhanelwa ngobukho bukaMesiya kaThixo. Ukuthobela kukaJoseph ekwenzeni ukuthanda kukaBawo ongunaPhakade ngentliziyo ethobekileyo necocekileyo kwamenza oyena mntu ubalaseleyo emhlabeni oyindoda, embindini weNtsapho eNgcwele. Utata kunye nobudoda bakhe zazifana naleyo yayinqwenelwa nguThixo kwasekuqaleni kwayo yonke into. Ke, njengokuba uSanta uJoseph ekhusele uMntwana kunye noMama wakhe, uyayikhusela iBandla ekukhuleni kwayo ngokwembali ngendlela encomekayo kula maxesha akho.
Amaxesha akhoyo afuna ukuphakanyiswa kwesigqubuthelo sesipho sikaThixo sokuqonda kukaSanta Joseph kwindima yakhe yeCawe kaKristu. Lixesha lokuba uveze amagama eleta yesibini eya kwabaseTesalonika, efihliweyo kwasekuqaleni kweCawa. Inene, umntu omangalisayo ozibamba okanye othintela ukubonakaliswa komchasi kristu kunye nolawulo lwakhe lwangoku kufuneka atyhilwe ukuze onke amalungisa aqonde iziganeko ezenzekayo. Kufuneka uhlale ulungile kwaye ugcine izibane zakho zibonakalise uNyana woMntu. Nasi isicatshulwa esingcwele sencwadi yesibini kaPaul eya kwabaseTesalonika, isahluko 2 (1-13):
Siyacela ke, bazalwana, mayela nokufika kweNkosi yethu uYesu Kristu nokuhlanganisana kwethu nayo, ukuba ningagungqiswa ezingqondweni zenu ngesiquphe, nangokoyika umoya, ”nangomlomo, okanye ngeleta ekuthiwa ivela kuthi ukuba imini yeNkosi isondele. Makungabikho namnye unikhohlisayo nangayiphi na indlela. Kuba ngaphandle kokuba kufike uwexuko kuqala atyhileke umntu ongenamthetho, lowo ugwetyelwe intshabalalo, lowo uzichasayo waziphakamisa ngaphezu kwabo bonke abathiwa nguThixo, kwanezinto abazinqulayo, ukuze azihlalele etempileni kaThixo, esithi unguye Anikhumbuli na, ukuba oko bendisekuni ndanixelela ezi zinto? Nangoku niyakwazi okubambezelayo, ukuze atyhileke ngelakhe ixesha.
Kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza; Kodwa lowo ubambezelayo makakwenze okwangoku kuphela, ade asuswe endaweni yakhe. Uya kuthi ke akuvela umchasi-mthetho, eyothi iNkosi [uYesu] imbulale ngomphefumlo womlomo wayo, imenze ongenamandla akubonakalalisa ukubuya kwayo, lowo kuza kwakhe kuvela ngamandla kaSathana kuzo zonke izenzo ezinamandla nangemiqondiso; nemimangaliso ebubuxoki, nakuzo zonke izinto ezikhohlisayo zenkohliso kwabo batshabalalayo ngenxa yokuba bengalwamkelanga uthando lwenyaniso ukuze basindiswe.
Ke ngoko, uThixo ubathumela amandla akhohlisayo ukuze bakholwe bubuxoki, ukuze bonke abangakholwanga yinyaniso kodwa bavumile ukwenza okubi bagwetywe.
Ke thina simelwe kukuhlala sibulela kuye uThixo ngenxa yenu, bazalwana bathandiweyo yiNkosi;
Eneneni, “imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza”; makwanele ukuba "lowo uyibambayo" ngoku ilahlwe. Namhlanje, ndithi kuwe: Lowo uzibambayo nguSanta Joseph! Ngomthandazo wakhe kunye nokuthethelela kwakhe, uSanta uJoseph unceda amakholwa kumzabalazo wokomoya wokukhusela ukholo lweCawa yokulwa, kunye nemithandazo yabangcwele kunye nemiphefumlo kwindawo yentlambululo-miphefumlo. Oko kukuthi, iBandla eliLoyisayo kunye neCawa yokuBandezeleka, uncedo lukaSanta uJoseph kunye neNtombikazi enguMariya, zenza ikhaka lokholo ebelibamba umchasi-Kristu kude kube ngoku.
Yivani amazwi am kakuhle. Indebe yobugwenxa iyaphuphuma, kwaye kungekudala kuza kufika ixesha leBandla apho intshutshiso yamalungisa iyakwenzeka. Kukuthanda kukaYise noNyana kunye noMoya oyiNgcwele ukuba kulo nyaka, 2021, kubhengezwe ngu-Pope Francis unyaka ka-Saint Joseph. Intsikelelo enkulu yokhuseleko inikwe wena. Ebudeni balo nyaka, uya kunyanzeleka ukuba wenze ukhetho. Into ezibonakalisa njengomsindisi wokugonya yinto engekhoyo. Kungekudala, uphawu lwerhamncwa luya kunyanzeliswa kuwe ukuze uthenge, utye, okanye uhambe. Unyaka ka-2021 ngunyaka wokuqonda kwabo bafuna ukuthembeka kuKrestu. Kubo bonke abo banqwenela ukulandela uKrestu, uSanta Joseph uza kukunceda. Kodwa kufuneka arhoxe ngokufihlakeleyo ngoDisemba 8.
Ngelo xesha, kwaye sele iqalile, bonke abo bamalayo uKristu bazakufumana bengena kumandla enkohliso eya kubenza bakholelwe ubuxoki-ubuxoki bezentlalo kunye neeplanethi ezilungiselelwe kwaye zalungiswa zii-acolyte zomchasi-Kristu. Benza iBandla elixokayo, elingumzimba wentlalontle ka-kristu. Ngabo abalawula ngokoyika, ngokulawula, ziingcinga zobukomanisi nezentlalo. Babumba ubuzalwana bobuxoki, bendalo iphela. Baye bangena ngaphakathi kwiCawe kaKristu ngenjongo yokuyonakalisa nokungcolisa iisakramente zayo. Yonke into iwela endaweni. Ukuqhubela phambili nge-8 kaDisemba, ezi acolyte zibi zizilungiselela ngokwazo ngemithombo yeendaba kwaye zenza imeko yokusola, uloyiko kunye nokugxekwa.
Kufuneka bazilungiselele ukuza kwaOngcwele ngokuququzelela ucwangco lwehlabathi apho iyantlukwano nesiphithiphithi ziya kulawula zonakalise iNyaniso yemfundiso yeCawe. Ihlazo kunye nezityholo ziya kubetha iBandla kuyo yonke indawo. Iintshukumo ezikhanyela amadoda nabafazi ziya kuba ngabagwebi abatsha bobuxoki bezentlalo. Iimbambano ziya kuvela kwiintsapho ziphikisana ngesidingo sokugonya kunye noMqondiso werhamncwa. Ungquzulwano phakathi kwamazwe luya kufikelela kwinqanaba lokuba yonke into ibonakale ingenathemba. Iintliziyo ziya kuphola, izazela ziya kubotshwa kwaye zimnyama sisono esigcwele yonke indawo.
Nangona ukhula lomchasi-Kristu lubonakala lutsala amalungisa kunye nabangcwele, kunika umbono wokufa kukaThixo nokuphela kweCawe yamaKatolika, konke oku kuyimbonakalo. Xa uSanta Joseph ethatha umhlala-phantsi, iNtliziyo engafezekanga kaMariya iya kuqala iziQalo zoKoyisa kwentliziyo yakhe engafezekanga kubantwana bakhe nakwiCawe. Icawa iya kuhamba ngeentlungu zokuhlanjululwa apho iNtombikazi kaMariya iya kuhamba naye njengoMama weentlungu. Abanye babantwana bakhe baya kuba ngabafelukholo; Baza kunxiba isundu soloyiso lukaKrestu ngemini yoKoyisa kweNtliziyo egqibeleleyo kaMariya. Ngexesha lokuvela komchasi-Kristu, ixesha leendawo ezide ezilungiselelwe ziintliziyo ezingcwele zikaYesu noMariya kunye nentliziyo esulungekileyo kaSanta Joseph iya kulila. Ii-refuges zingumsebenzi weminyaka emithathu enesiqingatha ebhengezwe kwiNcwadi yeSityhilelo. Ngumsebenzi kaThixo.
Umhlambi omncinci, ungoyiki. Jonga ngamehlo okholo, ithemba nothando. Iindawo zokufihla intloko ziphantsi kokhuseleko olukhethekileyo loMama wethu waseNtabeni yeKarmele. Yile ndlela awayefuna ngayo Intliziyo yakhe engenasono. Ngaba awuboni ngoku umsebenzi woSapho oluNgcwele lukaYesu, uMariya noJoseph? Yonke into ekufuneka uyazi ithethiwe. Phila ngokuzithemba ukufezekisa ukuthanda kukaThixo, kwaye uwuphindaphinde lo mthandazo rhoqo: Yesu, ndiyathemba kuwe!
cf. Uhlobo lomntu
cf. Ukususa isithintelo
Ukusetha kwakhona kwakhona kwaye Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi
ingqiqo: amandla okanye ukuqonda ukuqonda ukuba inoxanduva okanye kufanelekileyo ekuhlaleni.
exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, imiyalezo.
← UMartin - Intshabalalo enkulu…
Luz – Indlala Igalelekile →
Pedro-Sukulahla Ithemba Lakho Ngamana 18, 2022
UValeria-Cela ukuBuya koNyana wam Ngamana 14, 2022